Manampahefana ao Indônezia, manandrana manampim-bava ireo mpikatroka ao amin’ny Greenpeace, niova làlana rehefa voakiana · Global Voices teny Malagasy
Nokianin'ny Greenpeace ny politikam-pandripahana ala ao Indonezia, teraka ny resabe.
Voadika ny 21 Novambra 2021 5:15 GMT
“Ny fikapàna ala sy ny fikororosian'i Kalimantan 3″ an'ny DFAT photo library, nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0
Tamin'ity herinandro ity, tafiditra tanatina fifandirana ireo Indoneziàna mpiaro tontolo iainana, taorian'ny nametrahan'i Husin Shahab, sekreteran'ny Kaomitin'ny Lalàna Miady ho Famongorana ny Mafia, ny fitoriana ireo mpikatroka roa avy amin'ny Greenpeace Indonesia tany amin'ny pôlisy ho nanakiana ny politikan'ny filoha Joko Widodo (Jokowi) momba ny fikapàna ala sy ny tontolo iainana. Nanamafy i Shahab fa tsy mitombina ,ny fanakianan-dry zareo ary manitsakitsaka ilay lalàna miteraka resabe ao Indonezia momba ny Fandraharahàna sy ny fampitambaovao elektrônika (ITE Law).
Malaza ho midadasika be sy ahafahan'ny governemanta mametraka fepetra amin'ireo vaovao anaty tambajotra ilay lalàna ITE, amin'ny anaran'ilay antsoina hoe fanakanana ny fandisoana vaovao.
Ny 2 Novambra no nanomboka ny resabe, nandritra ny Kaonferansa nokarakarain'ny Firenena Mikambana hiresahana ny Fiovaovàn'ny Toetrandro (COP26), ka 141 ireo nanao sonia (hatramin'ny 12 Novambra), isan'ireny i Jokowi, nanao sonia tokim-panekena iray ho fampiatoana ny fanapahana ala manomboka eto ka hatramin'ny 2030. Tanatin'ny andro vitsy, ny minisitry ny ala sy ny tontolo iainana ao Indonezia, Siti Nurbaya Bakar, nilaza fa hataon'ny firenena ho laharampahamehana ny fampiroboroboana ara-toekarena raha mitaha amin'ny tontolo iainana, ary nanondro ilay fanomezantoky ho tsy rariny, izany hoe toy ny nanao dia miverina tamin'ny fanekena nataon'i Indonezia.
Tamin'io andro io ihany, nikabary tao amin'ilay kaonferansa ny filoha Jokowi , ka nandritra izany izy dia toy ny nanamaivana ny tantaran'ny fandripahana ala ao Indonezia sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana, “Tonga tamin'ny fetra ambany indrindra tato anatin'ny taompolo roa farany ny fandripahana ala ao Indonezia raha ny angondrakitra 2019-2020,” hoy i Jokowi. “Tsy azo odian-tsy hita ny zavabita tahaka izany.”
Novalian'i M. Iqbal Damanik, mpanao fanentanana avy amin'ny Greenpeace Indonesia Forest tamin'ny filazàna hoe, “Azo ambara ho tsy misy dikany ireo fanambaràna nataon'i Jokowi.” Ary ny kaonty Instagram an'ny Greenpeace Indonesia dia namoaka tatitra marobe sy lahatsoratra manohitra ireo filazàna nataon'i Jokowi tamin'ny fampitahàna azy ireny amin'ireo angondrakitra maharakotra vanimpotoana maharitra, tamin'ny fanamarihana fa ny fandripahana ala dia vao mainka aza nitombo mihoatra ny avo roa heny tato anatin'ny taompolo roa farany, raha 2,45 tapitrisa hektara teo anelanelan'ny 2003–2011, lasa 4,8 tapitrisa hektara teo anelanelan'ny 2011–2019.
ATSAHARO NY FANDRIPAHANA ALA
Asehon'ireo fikarohana vaovao ny fomba mahatonga ny fandripahana ala ho loza mitatao amin'ny fiainan'ny tsirairay amintsika. Fitantanam-panjakana. Ny tao Berau, Atsinanan'i Kalimantan dia niaina fitomboana maripàna be teo anelanelan'ny 2002-2018 noho ny fanimbàna ala.
Ireo lasitra fanaovana tavy sy ny firoboroboan'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia nanamafy ny fiantraikan'ny olan'ny toetrandro manodidina antsika. Ny safidy tokony horaisina avy hatrany dia ny fiarovana ireo ala sisa tavela ao Indonezia.
Ilaina ny tokim-panompoana avy amin'ny fanjakàna mba handanjàna ireo pôlitika any amin'ireo faritra misy ala voajanahary. Fotoana izao anatsaharana ny fanimbàna ireo ala trôpikaly sisa tavela eto ambonin'ny tany.
#OlanaToetrandro #FandripahanaAla #HutanKalimantan
Ho setriny, notorian'i Shahab tany amin'ny Polda Metro Java, pôlisim-paritra ao Jakarta ireo lohandohany ao amin'ny Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak ary Kiki Taufik. Nambarany tamin'ny CNN Indonesia: “Ny kiana raha toa ka marina, dia mitombina, kiana fotsiny ihany ireny. Raha toa ka tsy marina, dia mety ho fakom-baovao. Eny, (fitoriana nampiasàna ny lalàna ITE) satria misy vondrona marobe nahatsiaro ho voatohintohina ihany koa.”
Niteraka fanakianana marobe teny anaty tambajotra io hetsika io.
Tena zavamisy ny fandripahana ala, indrindra fa ao Kalimantan, ary mahafantatra izany ny Indoneziàna rehetra. Fa andraso fotsiny aloha, mbola misy tondradrano bebe kokoa miala any.
— Nia (@holidinafiha) 15 Novambra 2021
Taorian'ilay fanambaràna; tsy maintsy nandeha niseho tany amin'ny biraon'ny pôlisy ireo mpikatroka avy ao amn'ny Greenpeace. Asep Komarudin, mpanentana avy amin'ny Greenpeace Indonesia nilaza tamin'ny Tempo Indonesia fa:
Renay avy amin'ireo media mpiaramiasa aminay ny momba io fitoriana io, ary tsy nisy fampiantsoana avy amin'ny pôlisy. Hiatrika an'io izahay, eny fa na dia ny olan'ny toetrandro aza izao no tena atrehantsika, izay mila hetsika mivaingana avy amin'ny fanjakàna.
Efa nosintonin'i Shahab ny fitoriany mba hisorohana ny “famadihana ho resaka pôlitika” azy io sy ireo honohono milaza fa tsy mahazaka kiana ny fanjakana.
Tanaty resaka ho an'ny mpanao gazety, ny Talen'ny Fanadihadiana Ankapobeny ny Heloka Bevava ao amin'ny Polda Metro Jaya, Tubagus Ade Hidayat, nilaza fa, “Taorian'ny fifampiresahana, nesorina ihany no niafaran'ilay tatitra efa vitan'ny pôlisy, natsahatra ilay izy.” Notohizany hoe: “Tsy tiany ny hamadihana azy iny ho resaka pôlitika, tsy tiany ny hijerena azy iny ho toy ny endrika governemanta tsy mahazaka kiana, tsy tiany ny hisian'ny olana tahaka izany.”